Kulanka maanta guddiga madaxa bannaan ee Xudduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland ayaa intii uu socday waxaa lagu sheegay in safarro ay dhowaan ku tageen degmooyinka iyo deeganada gobolada Gedo iyo Jubbada hoose ay kulamo kula soo qaateen qaybaha kala duwan islamarkaana ay u sharraxeen hannaanka loo marayo doorashada.
Guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee Xudduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland Axmed Cumar Maxamed ayaa warbaahinta u sharraxay waxa u qabsoomay guddiga muddadii uu jiray.
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee Xudduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland Xamsa Cabdi Bare ayaa u mahadceliyey dhamaan shacabka Jubbaland ee sida diiran ugu soo dhoweeyey deegaanada ay tageen.
Xamsa Cabdi Barre Guddiga madaxa bannaan ee Xudduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland ayaa been abuur ku tilmaamay qoraalka lagu baahiyey baraha bulshada ee ahaa in beesha calaamka ay kala kulmeen cadaadis la xiriira qaabka loo soo xulaayo Xildhibaanada Barlamanka Jubbaland wuxuuna sheegay in doorashadu ay u dhacayso sida loo qorsheeyey.
Guddiga madaxa bannaan ee Xudduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland ayaa howshooda si habsami leh u wata waxaan dhowaan lagu wadaa in ay magaalada soo gaaraan Odayaasha dhaqanka ee soo xulaya Xildhibaanada Baarlamaanka.
the background of the new autonomy president Visits: 688028
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 34025
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 28707
Wararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay duleedka Muqdisho Visits: 80
Saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab oo duqeyn lagu dilay + Magacyada Visits: 70